Cadar: 8 mars waa maalin qiimo weyn u leh dumarka soomaaliyeed - Radio Sweden Somali - Raadiyaha Iswiidhen | Sveriges Radio
Cadar Ismaaciil guddoomiyaha ururka Somali Woman in Sweden sawir: Kenadid Mohamed/SR
Maalinta Haweenka Aduunka
Cadar: 8 mars waa maalin qiimo weyn u leh dumarka soomaaliyeed
La daabacay tisdag 8 mars 2016 kl 10.51
Markaan u fiirsaday taariikhda Sweden waxaa ii soo baxday in haweenka Sweden loo cadaadin jiray sida kuwo Soomaliya loo cadaadiyo.
Maanta waxay ku beegan tahay maalinta haweenka Adoonka ee 8 Mars. Maalinkan oo kale waxaa la weyneeyaa guulaha ay haweenka aduunka ka gaareen hal-ganka u dagaalanka xaquuqda dumarka, iyadoo sidoo kalena lays xasuusiyo in caalamka meelo badan oo ka mid ah weli lagu tunta xaquuqda dumarka.
Maalinkan ayaa dumarka soomaalida ugu fadhiya qiimo weyn sida qabta Cadar Ismaaciil oo ah guddoomiyaha ururka Somali Woman in Sweden, oo ah urur dumar oo ka jira magaalada Växjö dalkan Sweden. Gaar ahaan waxii ka horeeyey dagaalada iyo burburka Soomaaliya ka dhacay maalinkan waxuu uga dhignaan jiray maalinkii ay ragga iyo dumarka ay isku xaquuq noqdeen, sida ay tiri Cadar Ismaaciil.
- Waxay iiga dhignaan jirtay maalin aad u farxad badan oo aan u arkabo maalintii aan la sinaaday ragga Soomaaliyeed. Markii dowladda jirtay inkastoo ahaan ahaa gabadh yar oo markas soo hano qaaday, waqti ay xoriyad fiican soo baxaysay oo gabdhaha soomaaliyeed helayaan xornimo fiican, ayey tiri Cadar Ismaaciil.
Muddo todobo sanno ah ayey Cadar degantahay dalka Sweden. Intii dagaalada sokeeye dalka soomaaliya ka socdeen waxay ku sugnayd magaalada Xamar, waxayna ku howlaneyd ammuraha dumarka iyadoo horumood u aheyd urur dumar oo ku howlanaa ammuraha nabadda iyo nolasha, oo hadefku ahaa in da’yarta hubka laga dhigo iyo sidoo kalena kor loo soo qaado doorka ay dumarka ku leeyahiin nabadeynta.
Laakiin dagaalada sokeeye waxay dib u celiyeen iftiinkii xoriyad iyo sinaan ee dumarka somaaliyeed heleen xilligii dalka ay ka jirtay dowlad. Bulshadeena waxaa dib ugu soo xoogeystay hab-dhaqanka ku dhisan sareynta ragga, iyadoo ay guud ahaan meesha ka baxday waxii yaraa oo sinaan iyo xaquuq ay dumarka heleen inta dowladda jirtay , ayey tiri Cadar Ismaaciil.
Cadar Sweden markey timid waxay ku aragtay bulsho ilbax ah oo xaquuqda dumarka ay meel sare mareyso. Laakiin markey ukuurgashay taariikhada Sweden waxay aragtay in cadaadis maanta saaran haweenka soomaaliyeed uu sidoo kale horey haysan jiray dumarka Sweden:
- Markaan raadiyey taariikhda dumarka Sweden, waxaa ii soo baxday in dhaqankii hore ee Sweden iyo keeno soomaalida in ay isku dhigmaan. Dumarka sida loo cadaadin barigii hore Sweden iyo sida dumarka soomalida maanta xaalkooda yahay ayuu la mid ahaa. Balse Sweden ilbaxnimo denbe ayey gaareen. Anna waxaan isku dayaa in aan sii fahmo sida ay ku beddeleen, ayey tiri Cadar Ismaaciil guddoomiyaha ururka Somali Woman in Sweden.